Ahoana no To Travel Eco Friendly In 2020? | Save A Train
Home > fiaran-dalamby Travel torohevitra > Ahoana no To Travel Eco Friendly In 2020?
(Last Nohavaozina: 20/03/2020)
Eco namana Travel eo amin'ny lohalaharana ny saintsika rehefa miditra ao amin'ity folo taona vaovao. Mpikatroka mafàna fo amin'ny tontolo iainana toy ny Robert Swan sy ny Greta Thunberg, ny hafatra ho an'izao tontolo izao dia efa natolotra amin'ny kristaly fahazavana. Mihazakazaka isika avy ny fotoana hanaovana ny fiantraikany maharitra eto an-tany sy hiarovana ny harena sarobidy.
Change manomboka anio sy miaraka amintsika, ny fanapahan-kevitra raisintsika fa mampirisika tompon'andraikitra fizahan-tany. Rehefa mahatsapa kokoa ny fiantraikany eo amin'ny tontolo iainana sy ny Travel maharitra initiatives, mbola mirona mieritreritra ny Eco namana Travel ao koa ny hoe malalaka. tompon'andraikitra Travel intsony zavatra afaka misafidy ny mihinana amin'ny etsy sy eroa. Ny zavatra iray izay mila niangaliana fatratra e tenona eo amin'ny fiainantsika andavanandro, lasa toetra faharoa.
Io fironana no manao tsara miandalana onja nandritra ny eran-Travel orinasa. Travel orinasa no fampidirana ny herin'ny masoandro, fanodinana ny rano no nampiharana ny rafitra mba hampihenana ny fanjifàna sy ny plastika dia lasa nampalahelo fampiasana ny lasa. Misy hetsika maneran-lalina ny fiakaran'ny sy izay, miaraka amin'ny fanantenana sy ny fahatapahan-kevitra, dia hamerina tsara ho any amin'ny taranaka ho avy ny mpandeha mety afa-po. Ireto misy soso-kevitra ambony ny mikasika ny fomba Eco Travel Friendly:
Rail Fitaterana NO Eco Friendly Way To Travel. Thny lahatsoratra voasoratra mba hampianatra momba Train Travel ny Save A Train, Train mora indrindra Tickets Website In The World.
Maro ny dia lavitra nisafidy ny hampihenana ny entona karbona dian-tongotra manidina na kely na amin'ny alalan'ny fiaramanidina avy nanapaka tanteraka Tsidika, ankamaroan'ny mba ho setrin'ny teny malaza soedoa Flights Henatra (sidina mahamenatra). Tsy misy zava-miafina ny fitaterana anabakabaka amin'izao fotoana izao ny iray amin'ireo mpandray anjara mitombo haingana indrindra ny fikorontanan'ny toetrandro. Manidina foana na ho mpilalao tena lehibe eo amin'ny fomba misafidy ny Travel, dia mila ny hampahatsiahivina fa hafa endrika nandeha tolotra mampitolagaga Eco fety.
Train Tsidika manana nostalgic Ambiance fahiny, fahasoavana ary mahery vaika Eco namana Travel fandraisana an-tanana. Manolotra ny soa isan-karazany ao anatin'izany bebe kokoa legroom, nisakafo tao amin'ny fisakafoana fiara tsara tarehy raha mbola mankafy ny toerana manodidina, niara-dia ankizy dia mora lavitra sy ho an'ireo te hijanona mifandray, tsy misy nandositra maody. Train Travel ampitoviny mazava tsara ny tompon'andraikitra Travel.
Be Eco Friendly, Hiala ihany dian-tongotra
Na aiza na aiza no Travel, raha mandao ihany no dian-tongotra. Araka ny mpandeha Eco, isika efa mahalala izany. Na izany aza, amin'ny fironana izany manosika antsika hanao bebe kokoa, dia afaka mandray izany ny dingana lavidavitra kokoa. Ny zavatra tsara indrindra dia ny mahita mpandeha hiara sy miala amin'ny toerana tsara kokoa noho isika; Nahita azy. Tsy vidiny na inona na inona haka ny tapa-vitsivitsy fako izay hitantsika eny amoron-dranomasina na any an'ala. Ary, handevonana ny tsara midika izany fa tsy tanety ao amin'ny Ranomasimbe.
Hihinana sy hisotro eo an-toerana
Fanohanana an-toerana dia tsy ho Eco namana Travel fandraisana an-tanana fa ny fiaraha-monina ihany koa upliftment fandraisana anjara. Mividy an-toerana dia midika fa tsy misy olona maintsy hitondrana ireo entana. kokoa, orinasa eo an-toerana dia manana ny fahafahana miroborobo. Izy io dia hampihenana karbaona dian-tongotra sy ny vondrom-piarahamonina ao an-toerana fandresena.
Aoka A Part Of The Eco Friendly Conversation
Ny fironana lasa fironana satria tsy ampy ampahany amin'ny resaka manerantany. Amin'ny maha-Eco nanao dia lavitra ho any Eco namana Travel fitsipika, tokony hanao sy ho anisan'ny fitantarana izany. Ny feo dia manana fahefana. Rehefa mifandray amin'ny namana niaraka, ary rehefa mandeha any miavaka vazan-tontolo izao. Mila fanelezana ny hafatra. Isika rehefa mitarika ny hafa amin'ny alalan'ny ohatra, ary rehefa manao ireo fiovana ilaina ny amin 'ny fiainantsika sy ny fomba anjara amin'ny fizahan-tany maharitra, dia aingam-panahy ny hafa mba hanao toy izany koa.
Ampiasao Fitateram-Bahoaka Or Walk
Na dia toa unappealing amin'ny voalohany sy ny fikarohana zavatra ilaina hatao amin'ny mikasika ny ny fiarovana ny fitateram-bahoaka sy ny toerana, faobe fitaterana dia Eco namana fomba Travel around. Mampiasa ny tanteraka nampihena habetsaky ny solika isaky ny mpandeha raha oharina amin'ny fiara.
A toerana Manasa ny mpandeha mba hanitrika ny tenany amin'izay rehetra manana ny tolotra. Misy tokoa dia tsy misy mahasoa ny fomba sy ny olona mifandray, miaina ireo kolontsaina sy revel ao amin'ny manodidina tontolo iainana. Fitateram-bahoaka no mandray fotsiny fa sady mandeha dia na dia tsara kokoa hafa.
Pack Light Ary Eco Friendly
Izy io dia fahadisoan-kevitra lehibe ny fonosana misy dikany mazava. Fonosana mazava isalasalana fa dia Eco namana Travel fitsipika dia afaka mora foana mandany rehetra, ary manana fiantraikany lehibe. Ny maivana izahay entana, ny maivana ny fombafomba ny fitaterana ary izany dia hilanja adika hoe tsy dia fanjifàna solika.
Fomba iray hafa milalao ny anjara Travel maharitra dia ny mba jereo kely ny Travel maika. An Eco namana Travel fitaovana dia mety ahitana ny volotsangana borosy nify, shampoo trano fisotroana sy ny savony bara fa tsy ny fandroana gels. Miniature shampoos sy conditioners ary azo ampiasaina indray ranon porofo tumblers. Aluminium water bottles are vital as well as a metal straw.
Ny lehibe indrindra Travel fironana ho 2020 milaza fa experiential mandeha no fomba vaovao mba handeha. Move over, it is classics. Izany no mahatonga ny traikefa izay toerana ho an'ny kolontsaina seho manokana, fiaraha-mientana tsy manam-paharoa sy ny momba toerana.
Mifidiana Suppliers hanolo-tena Sustainable Travel.
Diniho ny Destination mila Tourism.
Raha miahy ny tontolo iainana ary tia ny fahaiza-mandeha, dia hitahiry, hiaro sy hanao ny Travel midika zavatra lehibe kokoa ho an'ny fikambanana ny voka-tsoa amin'ny tany sy ny Eco fizahan-tany. Atombohy amin'ny alalan'ny famandrihana fiaran-dalamby dia niaraka tamin'ny Save A Train, amin'izao fotoana izao!
Tianao ve mba hiraketana ny bilaogy lahatsoratra “Ahoana no To Travel Eco Friendly In 2020?” tao amin'ny toerana? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome antsika-bola miaraka amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: ny https://embed.ly/code?url = ny https://www.saveatrain.com/blog/travel-eco-friendly/ ‎- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
Mikasa ny Travel
Train Tsidika, Train Travel Alemaina, Travel Europe
Train Travel Hongria, fiaran-dalamby Travel torohevitra, Travel Europe
12345678910111213141516171819202122232425262728293031 Jul 2020Aug 2020Sept-pahatonga ny taona 2020Oct 2020Nov 2020Dec 2020Jan 2021Feb 2021Mar 2021Apr 2021Mey 2021Jun 2021